Ekpere maka ime baptizim. ? Dị ka nwata nwoke na nwa agbọghọ na Corta [n'ụdị obe]
Ekpere maka baptizim Dika umu nwoke na umu agbogho, ihe nkenke na nkenke mara eziokwu bu na baptism bu ihe omume nke ime mmuo na ebe anyi n’ekwuputa okwukwe nke e mere ka o sie ike site n’ekpere.
N’agbanyeghi afọ obula nke onye aga eme baptism, okwukwe bu ihe n’enweghi ihe jikoro ya na nkpa kama ya na oku nke sitere n’obi, a na-eji ekpere mee ka oku a di ike ma nwee ike iburu ya si n’obi na okwukwe were obi ike.
N'ihe banyere baptism umu aka, eme ha dika okwukwe ha ebe ndi nne na nna kuziri ha site na mgbe ha di na nwata ihunanya n’ebe oru nke Onyenwe anyi.
1 Ekpere maka baptizim
2 1) Ekpere maka ekeresimesi nwanyi
3 2) Ekpere maka ime nwata
4 3) Ekpere maka akwụkwọ ịkpọ oku
5 4) Ekpere na-adịghị ala ala
6 5) Ikuku baptism
6.1 Kedụ ekpere maka baptizim maka?
6.2 Ahịrịokwu ndị a hà dị ike n'ezie?
Ihe dị mkpa nke ihe a niile bụ iji nkwenye na ihe ọmụma niile na-eme. Enwere ike ikpe ekpere maka baptizim ndị nne na nna, ndị nna nna ma ọ bụ onye ọ bụla ọzọ n’ezinụlọ ma ọ bụ enyi nke nọ na oku ịkpọ oku ime ya.
1) Ekpere maka ekeresimesi nwanyi
Nna nke Eluigwe hụrụ n'anya, anyị na-abịa n’ihu gị taa igosi ndụ nke (aha nwata nwanyị).
Site n’onyinye onyinye nke ndu ya n’ime ezin’ulo anyi, ma n’onwere ike ike na amamihe gi, anyi na-akpo ngozi gi na ndu ya taa.
Ka ọ bụrụ nwa agbọghọ gbasiri ike, sie ike ma nwee ọgụgụ isi; Ka o jiri amamihe na ntuzi aka gi too ruo mgbe o ghuru nwanyi dika Meri nne Jesu.
Ka ị họrọ nwa anyị nwanyị ka ọ mezuo ebumnuche gị ebe a na Earthwa. Nke ahụ na-edo onwe gị n'okpuru uche gị, nke maara etu esi eto gị, jeere gị ozi ma hụ gị n'anya.
Ya achọputa ezi ihe gi rue ubochi ndu ya niile, na o nweta ngozi gi na ugwu ya.
Mụ nwanyị ahụ nwere akụkụ dị nro na akụkụ siri ike nke na-eme ka ha pụọ ​​iche na ọ bụ ya mere ekpere maka baptizim ga-eji nwee otu ihe dịịrị ha. Ihe isi ike nke ndu bidoro itinye n’oge di nkpa nwere ike sie ike ma mgbe anyi n’ekpebi ime ha na onwe ha ihe mgbe ha n’ekpe ekpere ha, anyi n’enye ha ihe ndi di nkpa nke ha g’eji n’ihu.
2) Ekpere maka ime nwata
Eze nke ndi eze na Onye nwe Onyenweanyi, lee anya n’ihu ebube gị iji gosi ndụ nwa anyị n'ihu gị (aha nwa ahụ).
Ana m ekele Chukwu nke ukwuu maka ịtụle anyị kwesiri ịbụ nne na nna nke nwa a mara mma. Anyị kwere nkwa ilekọta gị, hụ gị n'anya ma duzie gị n'ụzọ ezi ndụ. Ma anyị bịakwara taa ịchọ ngọzi gị maka ndụ gị niile.
Ka ọ bụrụ “Enyi Chineke” dị ka ohu gị bụ Moses. Ka ị mara n'oge na -adịghị anya ebumnuche gị na ndụ, ka ị ghara ido onwe gị n'okpuru sistemụ ụwa mana mee uche gị ka ị nwee ihe ịga nke ọma kpamkpam. Ka ọ dịrị nwayọ ịnabata nkuzi gị ma nwee amamihe ịnabata na gị, Chineke, bụ ihe niile. Na a ghọtara ya n'akwụkwọ na iwu, nwee nkà n'okwu, nnukwu onye ịhụ mba n'anya na onye ndu.
Anyị na-agọzi ya otu a maka otuto nke Aha gị nke dị elu karịa aha niile.
Alsom alsontak alsor have nwekwara theirm prayerm specific ha d specific icheiche n'ihi na timesz times oge nke inn ind in ha na etolite, otutu ihe gha emet be ha aka ma that b that ihe mere oji b ther prayer baptismb baptismr baptism onyinye nke form baptismntak childrenr becomes banyere loveh ann'anya, okwukwe na nnyefe Okwu nke Onye-nwe na-agwa anyị banyere ihe ọ bụ izi nwata na ụzọ nke Onye-nwe site na nwata, ọ bụ ya mere site na nzukọ ụka ka ihunanya na nnyefe nke ndụ nsọ juputara na mmekọrịta nke Chineke Nna na Ndị nsọ gị niile
3) Ekpere maka akwụkwọ ịkpọ oku
Daalụ Chukwu maka inye m ndụ.
Ana m ekele ndị mụrụ m maka igosi m ụzọ.
Ekele diri Ezin’ulo m nyere m ha.
Ekele diri ndi nkwado m maka ịhazi ogwu ha.
A na m akpọ gị oku ka ị mee m baptism na Sọnde, Mee 22 na elekere 1 nke abalị nke thelọ Nsọ nke Nwanyị Nwanyị nke Ndị ogbenye. Mgbe ahụ echere m ka ị rie n'ụlọ ezumike dị na Plan Street na San Luis 00. Daalụ.
Ọ dị ezigbo mkpa ịnwe ọnụnọ nke ezinụlọ anyị na ndị enyi anyị. N’ihi ya, anyị ga-enwerịrị ekpere iji jiri obi ụtọ kpọọ gị.
Nke ahụ bụ ihe ekpere a maka akwụkwọ ịkpọ oku christrist bụ. Nwere ike iji ya mee ihe n ’akwụkwọ ịkpọ oku.
4) Ekpere na-adịghị ala ala
Chineke dị ebube, otuto na nsọpụrụ dịrị gị, onye naanị gị bụ onye kere ndụ.
Lee, anyị nọ n’ihu ọnụnọ gị iji gọzie ndụ nke (aha nwa ahụ/ ninã), nwa mara nma nke I nye anyi nwa nwoke.
Anyị na-agọzi gị nke na ruo taa, bido ndụ gị na nduzi na nchedo gị. Ka nwa anyi nwoke tolite n’amara na Mọ Nsọ gi bu ezigbo enyi ya. Ka ndu ya tozuo ebighebi dika ndu Abraham; na nke dika ya, nwee ndidi ichere mmezu nke nkwa nke Chukwu, onye kwere n’okwu gị na nkuzi gị, yabụ obi gị ga-amasị Chineke anyị.
Bụrụnụ nwa nwoke a gọziri agọzi, ahụike, sie ike ma nwee nnukwu otuto maka otuto nke Chineke.
Ekpere siri ike n’agbanyegh i ogologo ma o di mkpụmkpụ, ihe dị mkpa bụ na okwukwe e mere ha. N’ime Akwụkwọ Nsọ enwere ọtụtụ ọmụmaatụ nke anyị nwere ike ịchọta n’ime ya nke anyị ga-ekwu maka mkpirisi ahịrịokwu ndị a zara n’oge dị ngwa. Nke a bụ ihe anyị kwesịrị ilebara anya. E nwere ogologo ekpere na-enweghị okwukwe na obere ekpere dị ike, ha niile na-esite na okwukwe i nwere ọ bụghị oge ọ nọrọ.
5) Ikuku baptism
Ekpere maka baptism
Y’oburu na ichoro ka anyi dozie adiri ndi ozo nke baptism, ayi nwere ha nke di n’elu obe. Ọ bụ ihe kachasị mma anyị hụrụ. Jiri ohere zuru ezu!
Kedụ ekpere maka baptizim maka?
Ekpere na-enyere anyị aka sachapụ mkpụrụ obi na mmụọ anyị Ọ na - eme ọhụụ site na usoro ekpere niile n'ihi na ọ na - ewe oge ma na - enyefe ya iji mee ka mkpụrụ obi jupụta na ya. Site n’oge anyị dị njikere ikpe ekpere, ọ na-amalite ịrụ ọrụ n’ime anyị, ebe ọ bụ na inye oge anyị n’irubere Chineke isi dị mma karịa àjà ọ bụla ọzọ anyị nwere ike ịchụ. N'ihe banyere baptism obula odi kari otua nihi na etinye ntinye ime mmụọ n’ihu Chineke.
Ekpere maka Baptism na-akwado iji dozie mmụọ anyị maka ihe a ga-eme. Oburu na baptism di na umuaka, site na ekpere ndi a, anyi nwekwara ike ịrịọ maka odinihu, ka Chineke n’edepu ihe nile ha n’uche mgbe nile.
Ahịrịokwu ndị a hà dị ike n'ezie?
Ekpere niile ejiri okwukwe mee siri ezigbo ike na ọ bụ ya mere ha ji bụrụ ngwaagha ime mmụọ nke anyị nwere ike iji ebe ọ bụla ma ebe anyị nọ n'agbanyeghị ihe anyị rịọrọ.
Ekpere nwere ike ime ka ndị nwụrụ anwụ si n’ili pụta ka anyị na-ahụ n’okwu nke Chineke n’ilu ​​nke Lazarọs na ọ nwụọlarị ọtụtụ ụbọchị na naanị otu mkpụrụ ka ọ dị ndụ.
Dios, Ebumnuche, Santos